Umadda Somali Gobanimo Ayaa Rabi Ku Maneystay Ee Yaanu Iska Qaadin Haddi Kale Cuqubada Umadda Kurdiga Inaga Tira Badan Haysata Ayaa Ina Heli-Karta .. Kurdiga Waa Ummad Ayaan Daran
Kurdidu waa Ummad tiradeeda lagu qaddaro 35 Malyuun oo Qof .. Asalkooda fogi ma aha Bariga Dhexe ee waa dhulka loo yaqaan Aasiyada Yar waxayse iyagu asal ahaan sheegtaan iney ka yimadeen xaga afgaanistaan .. Ka mid ma aha dadyowga loo yaqaan “Semitic” – Saami.
Imbaradooriyaddii dawladi Cabbaasida Carabta ayay dadkani ka dhex muuqdeen awood ahaan markii kowaad oo kaalin Millateri iyo tu siyaasadeedba ku yeesheen. Laakiin dhanka fikirka Islaamka wax yar bay ku darsadeen .. Xagga dagaalka waxaa ka dhashay halyeygii weynaa ee Salaaxuddiin Ayuubi, oo asaas u noqday dawladdii Ayuubiyada ee boqol jirsatay.
Dadka Kurdidu abuur ahaan waa dad aad u dhiirran oo geesiyaal ah, tabta soomaalida, waana dad dhaqankooda dhabta ahi ahaan jiray xoola-dhaqato. Sidii ay Carabtii Cabbaasidu askar uga dhigtay tab la mid ah ayay Turkidii Cismaaniyaduna uga dhigatay. Labada jeerbana iyagu ma ay gaari jirin dawladnimo.
Barta ay dunida kaga yaallaan baa Ilaahay ku ciqaabay oo dawlado waaweyn iyo ilbax-nimooyinka Islaamka iyo Masiixiga ayaa dhulkooda ku loollama ..Waa dad ayaan-daran oo quwada casriga ah ayay bartanka ugu jiraan: iiraan, Ciraaq, Suuriya, Turki iyo Ruush (Turkumanistaan). Waa ummad ayaan-daran.
Dagaalkii dhowaan lagu jabiyay “Dawladda Islaamka ee Ciraaq iyo Suuriya” Kurdidu hormuud bay ka ahaayeen oo waxa ay ku waayeen 12000 oo Nin. Waxay intaas oo wiil u hureen in Maraykanka iyo Galbeedku aqoonsado. Laakiin wax walba asalkii baa lagu soo celiyay. Dawladihii weli waa saaxiib, Kurdidiina weli waa addoomo.
Soomaaliyey gobanimada Rabbi innagu mannaystay, ee aan cid innaga qaadday jirin, inagu yaynnaan is ka qaadin. Haddii kal cuqubadaa Kurdida innaga tirada badan haysata ayaa ina heli karta.